ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ ထပ်မံ နှောင့်နေးဖွယ်ရှိ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ ထပ်မံ နှောင့်နေးဖွယ်ရှိ
BANGKOK, THAILAND - FEBRUARY 2: Anti-government protesters gather in front of ballot boxes in preventing voting atapolling station during Thailand's general election on February 2, 2014 in Bangkok, Thailand. Despite weeks of anti-government protests and election related violence in the run-up to the controversial snap-poll, voting passed without major incident, whileanumber of polling stations were closed because of protest activity within the vicinity. Protest groups opposed to the government of caretaker Prime Minister Yingluck Shinawatra have called for political reform to take place before elections. (Photo by Rufus Cox/Getty Images)
ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ ထပ်မံ နှောင့်နေးဖွယ်ရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကာလအတန်ကြာ နှောင့်နေးမှုတွေ ရှိနေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ထပ်မံ နှောင့်နေးမှု ဖြစ်လာဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
ထိုင်း ဥပဒေပြုရေး လွှတ်တော်က ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေသစ် စတင်မယ့်ရက် နှောင့်နှေးစေဖို့ ဆန္ဒမဲပေးခဲ့တာကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အထိ နှောင့်နှေးဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ ထိုင်းစစ်အစိုးရဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ရွေးကောက်ခံ အစိုးရကို ဖြုတ်ချခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းစစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲကို အခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေသစ် စတင်မယ့်ရက် နှောင့်နေးတာကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကလည်း နှောင့်နေးဖွယ် ရှိနပါတယ်။ ဖြုတ်ချခံရတဲ့ ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ ထိုင်းစစ်အစိုးရဟာ အာဏာကို ဆက်လက် ကိုင်ထားချင်နတယ်လို့ စွပ်စွဲထားပါတယ်။
ထိုငျးနိုငျငံမှာ ကာလအတနျကွာ နှောငျ့နေးမှုတှေ ရှိနတေဲ့ ရှေးကောကျပှဲဟာ ထပျမံ နှောငျ့နေးမှု ဖွဈလာဖှယျရှိနတေယျလို့ သုံးသပျနကွေပါတယျ။
ထိုငျး ဥပဒပွေုရေး လှတျတျောက ရှေးကောကျပှဲ ဥပဒသေဈ စတငျမယျ့ရကျ နှောငျ့နှေးစဖေို့ ဆန်ဒမဲပေးခဲ့တာကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲဟာ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ အထိ နှောငျ့နှေးဖှယျ ရှိနပေါတယျ။ ထိုငျးစဈအစိုးရဟာ ၂၀၁၄ ခုနှဈက ရှေးကောကျခံ အစိုးရကို ဖွုတျခခြဲ့ပွီး ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပပေးမယျလို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယျ။
ထိုငျးစဈအစိုးရက ရှေးကောကျပှဲကို အခုနှဈ နိုဝငျဘာလအတှငျး ကငျြးပမယျလို့ ကတိပေးခဲ့ပမေယျ့ ရှေးကောကျပှဲ ဥပဒသေဈ စတငျမယျ့ရကျ နှောငျ့နေးတာကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲကလညျး နှောငျ့နေးဖှယျ ရှိနပါတယျ။ ဖွုတျခခြံရတဲ့ ထိုငျးအစိုးရအဖှဲ့ဝငျတှကေတော့ ထိုငျးစဈအစိုးရဟာ အာဏာကို ဆကျလကျ ကိုငျထားခငျြနတယျလို့ စှပျစှဲထားပါတယျ။
Previous articleကမ်းရိုးတန်း အမြန်ရေယာဉ်ပေါ်က ခရီးသည် နှစ်ဦးပြုတ်ကျ၊ တစ်ဦး ပျောက်ဆုံး
Next articleဆယ်ကျော်သက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေက လိင်ပညာပေး လုပ်ဖို့လိုကြောင်း ညွှန်ပြနေ